အော် ! တရုတ် ! တရုတ် ! (humorous jokes) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အော် ! တရုတ် ! တရုတ် ! (humorous jokes)
အော် ! တရုတ် ! တရုတ် ! (humorous jokes)
Posted by Don Juan Ronald on Mar 18, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 29 comments
၁ ။ ကျ နော့ ၏ ရေး သား ချက် များ သည် တ ခါ တ ရံ adult အ ကြောင်း များ ပါ ရှိ တတ် ၍ ၊ ၁၈ နှစ် မ ပြည့် သေး သော ခ လေး များ နှင့် အ မျိုး သ မီး များ ဖတ် ရှု ရန် မ သင့် ပါ ။
အ ထူး သ ဖြင့် မိမိ ကိုယ် ကို မိမိသူ တော် စင် သူ တော် ကောင်း များ ဟု ယူ ဆ နေ သူ များ ၊ လုံး ဝ ဖတ် ရှု ခွင့် မ ပြု ပါ ။
( ခြံ ခတ် ထား ရက် သား နဲ့ ဝင် ခိုး ဖတ် မိလျှင် ၊ လုံး ဝ တာ ဝန် မည် မ ဟုတ် ပါ )
ဆရာ ရင်မောင် က ကျနော့ ကို ဖါခေါင်း ဆို သော ရာ ထူး ကြီး ကို ချီး မြင့် အပ် နှံ ပြီး နောက် ၊ ကျ နော် မ ရေး တော့ ဘူး ၊ ဖတ် ဘဲ ဖတ် တော့ မယ် လို့ဆုံး ဖြတ် ထား ပါ တယ် ၊ ဒါ ပေ မဲ့ ခက်ခက် ခဲခဲ ဖြင့် အ ချိန် ကုန် လေ့ ကျင့် ယူ ထား တဲ့ ဗမာစာ ရိုက် နည်း ကို နှမျှော မိ သည့် အ တွက်……….။
ဈေး သည် များ ၏ စီး ပွါး ရေး ဦး ဏှောက် ။
တရုတ်ကြီး တ ယောက် သည် Bras များ ရောင်း ချ နေ သော ဂျူး ဆိုင် တ ဆိုင် ထဲ သို့ဝင် ပြီး size 38 အ နက် ရောင် Bras ကို ဝယ် ယူ လို သည် ၊
ဂျူး များ သည် စီး ပွါး ရေး ဦးဏှောက် အ လွန် ကောင်း သည် ကို အ များ အ သိ ဘဲ ပေါ့ ၊ အင် မ တန် မှ ရောင်း ထိုင်း တဲ့ အနက် ရောင် size အ ကြီး စား Bras ကို ဒီ တရုတ်ကြီး က တ ကူးတက လာ ရှာ ပြီး ဝယ် တယ် ဆို ရင် ဖြင့် ၊
Size 38 Black Bras
ကောင်းကောင်း လေး ဆော်လိုက် ဦး မယ် ဟု ဆုံး ဖြတ် လိုက် ပါ သည် ။ ခါ တိုင်း တစ် စုံ ကို ဒေါ်လာ ၄၀ တောင် ရောင်း ရ ခက် မည့် ဟာ ကို တရုတ်ကြီး အား ဒေါ်လာ ၅၀ တောင်း လိုက် သည် ၊
တရုတ်ကြီး လည်း ဘာ မှ မ ပြော ဘဲ ငွေ ချေ ပြီး ၂၅ စုံ ဝယ် သွား ပါ လေ တော့ သည် ။
တ ပတ် ခန့် ကြာ သော အ ခါ တရုတ် ကြီး သည် ပြန် လာ ပြီး ထို ဂျူး ဆီ မှ နောက် ထပ် အ စုံ ၅၀ ဝယ် လို သည် ဟု ဆို ၏ ၊ ဂျူး လည်း သူ ခက်ခက် ခဲခဲ ဖြင့် ရှာ ဝယ် ထား ရ ပါ ကြောင်း ၊ ဒီ တ ခါ တ စုံ ကို ဒေါ်လာ ၆၀ ရ မှ ရောင်း နိုင် တော့ မည် ဖြစ် ကြောင်း ၊ တရုတ် ကြီး လည်း ဈေး မ ဆစ် ဘဲ ငွေ ချေ ပြီး ယူ သွား လိုက် ပါ သည် ။
တစ် လ ခန့် ကြာ သော အ ခါ ထို တရုတ် ကြီး ပြန် ပေါ် လာ ပြန် ပြီး ၊ ထို ဂျူး ၏ ဂို ဒေါင် တွင် ကျန် ရှိ နေ သေး သော အ စုံ ၅၀ ကို သူ အ ကုန် ဝယ် မည် ဟု ဆို ၏ ၊ ဂျူး က လည်း ဒီ တ ခါ သူ ၇၅ ဒေါ်လာ မ ရ လျှင် မ ရောင်း တော့ ဘူး ဟု ပြော လိုက် သည် ၊ တရုတ်ကြီး လည်း ဘာ မှ မ ပြော ဘဲ ငွေ ချေ လိုက် ပြန် သည် ၊ ထို အ ချိန် တွင် ဂျူး သည် လုံး ဝ မ အောင့် နိုင် တော့ ဘဲ “ ဒီ မယ် ၊ ဆွေ မျိုး ပေါက် ဖေါ် ကြီး ! ခင်ဗျား ဒီလေါက် အုံ ကြီး တဲ့ မိန်းမ တွေ အ များ ကြီး ကို ဘယ် မှာ သွား ရှာ တာ လဲ ? ” ဟု မေး လိုက် သည် ။
တရုတ်ကြီး လည်း ပြုံး ပြုံး လေး နဲ့ “ ကျ နော် ဒီ Bras တွေ ကို နှစ် ခု ဖြစ် အောင် ဖြတ် ပြီး နည်းနည်း ချုပ် လိုက် တယ် ၊ ပြီး ရင် တ လုံး ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ နဲ့ ကျနော့ ဂျူး ဖေါက် သည် များ ကို skull cap အ နေ နဲ့ရောင်းပေး တယ် လေ ”
ထို အ ခါ ဂျူး သည် ကိုယ့် နှာ ဖူး ကို နာ နာ တ ချက် ရိုက် ထည့် လိုက် ပြီး မူး လှဲ သွား ပါ တော့ သည် ။
ကတုံး ပေါ် ထိပ် ကွက် ဆို တာ ဒါ မျိုး လား မ သိ ဘူး နော် ။
Jewish with skull cap
( သူ ငယ် ချင်း ပေး ပို့ ထား သော mail ကို ဘာ သာ ပြန် ပြီး မဆလာ နဲ့အ ဆာ ပ လာ များ ထည့် ၍
ကွန့် ထား ချင်းဖြစ် ပါ သည် )
လူ ကြီး များ အ တွက် သီး သန့် ဟာ သ တ ခု တင် ဆက် ပါ ရ စေ။
(လူ ကြီး များ ဟု ဆို ရာ ၌ ၊ အ များ ပြည် သူ ကို အ နိုင် ကျင့် နေ သော အာ ဏာ ပိုင် များ မ ဟုတ် ဘဲ adult ကို ဆို လို ပါ ၏။)
သူ တော် စင် များ ခင် ဗျား ! ဤ နေ ရာ တင် ရပ် တန့် ပြီး ၊ ထွက် ခွါ သွား ဖို့တောင်း ပန် အပ် ပါ သည်။
ငှက် ပျော သီး ကြော် ။
မြေနီကုန်း မှတ်တိုင် သို့ ရောက် တဲ့ အ ခါ ဘေး မှ ကောင် က လေး သည် မစန်းစန်း ကို “ အမ ! လက် လွတ် လိုက် တော့ ကျ နော် မြေနီကုန်း မှာ ဆင်း တော့ မယ်” တဲ့
Don Juan Ronald ရေ ပထမပို့စ်မှာထဲကတောင်းပန်ထားပါတယ်ဗျာ
ငှက်ပျောသီးကြော်က လက်ထဲမှာ လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ရုန်းနေမှာပဲနော်။
နောက်လည်း ရေးသားပါအုန်း [em:3:] [em:3:] [em:3:]
အဲ့ဒီငှက်ပြောသီးက မာလား ပျော့လား ဟင်င်င်
တော်ပါပေ့ Don Juan Ronald ရယ် ဦးသော်တာဆွေ တို့ အီကြာကွေးတို တမလွန် web site ကနေ
ဖတ်နေရင် မျိုးဆက်သစ် ရသွားတဲ့ အတွက် စိတ်အေးကြမှာပါ အော် ဒါနဲ့ မစန်းစန်း အတက်အဆင်း
လုပ်တဲ့နေရာလေးသိရင် ကျွှန်တော့်စီmail ပို့ပေးပါလား ငှက် ပျေားသီး လေး ငှါးလိုက်ချင်ပါရဲ့နော်
ဒွဒ်ခဘဲ ဒီလူကြီးဘာတွေရေးတာတုံး ရီရတယ် ဗျိုး
ကျုပ်က သူဒေါ်စင်ဂျီးဆိုဒေါ့ ဖတ်ဘူး
ကျုပ် ကတော့ ကြိုက်၏ ။ အန်ကယ့်စာဖတ်အပြီး ပြုံးရ၏ ရယ်ရ၏
သည်လိုမျိုးလေးတွေ ကို အဆက်မပြတ် ဆက်တိုက် တင်ဆက်သွားမည် ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း
( စကားမစပ် ၊ အန်ကယ့်ကိုယ်စား အသူရာ့ အမေးကို အဖြေထုတ်ကြည့်ရလျှင် ၊ မစန်းစန်း မကိုင်မှီ ပျော့နေမည် ။ စကိုင်ပြီး ၁မိနစ်ခန့် တွင် ကောင်းကောင်းကြီး မာသွားမည် ။ ဟီဟိ )
တယ်လည်း တွေးတတ်ပေသကိုး …
အနော်ကလဲ ကရေးချိုတော့ ငှက်ပျောသီးဆိုတာကို ဖတ်မသွားပါဘူး …:)
နှက်ပျောတီး ကို ဖတ်ဘူးးးးးးးး
side dish ဖြစ်တဲ့ငှက်ပျောသီးကိုသာ အလေးထား ပြီး မိန့် မနေကြဘဲ၊
main dish ဖြစ်တဲ့ Black Bras ကိုလည်းမိန့် ပေးပါလားခင်ဗျာ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တကယ်တော့.. မြန်မာ့ရိုးရာ.. စကားတွေထဲ.. မုန်လာဥလာလုပ်မနေနဲ့ဆိုတာ ရှိတယ်မဟုတ်လား..
ကျေးလက်မှာ.. ညအမှောင်ထဲ.. လင်ယောကျာ်းက.. လင်ငယ်ကို.. အိပ်ယာထဲအမိဖမ်းတဲ့အခါ.. မယားကို.. ခဏအကိုင်ခိုင်းထားတာလို့.. ဖတ်ဖူးပါတယ်..။
မီးရှာပြီးထွန်းတဲ့အခါ.. မယားဖြစ်သူက.. မုန်လာဥကိုကိုင်ထားတယ်တဲ့..
အဲဒါကနေ.. “မုန်လာဥလာလုပ်မနေနဲ့” ဖြစ်လာတာ…တဲ့…။
အဲဒီ့မုန်လာဥ က ဗမာလား ထိုင်ဝမ်လား ဟင်
ကိုပေ ယူအက်ကပါဗျ အမျိုးကောင်း အဘိုးကောင်း အမျိုးမှန် ဂျိုးတန်လေးပါခင်ည (နာချင်တာနဲ့နာပါဗျိုး)
အလိုဗျာ ။ မနာပါရစေနဲ့ ဗျာ ။ ဖတ်တော့ ဖတ်တယ် ။ ပြီးတော့ ရယ်တယ် ခင်ဗျ ။ ဟားးးးး
အရင်တုန်းက ဆားစ်ရောဂါတွေဖြစ်တုန်းက တရုတ်ပြည်က လူတစ်ယောက်က သူ့မိန်းမရဲ့ ဘော်လီကို ချူပ်ပြီး ၀တ်ဖူးပါကြောင်း
အဟီ ရီလိုက်ရတာဗျာ အပျိုကြီး ကလဲ သူရဲ့ငှက်ပျောသီးကို ရေလည်ကာကွယ်သွားပုံပဲ
သူတော်စင်လည်း မဟုတ်သောကြောင့် ခိုးဖတ်သွားပါတယ်ချင့်။
ဒီလောက် ဗမာစာကို ပုံလေးတွေနဲ့ လှလှပပ ဝေေ၀ဆာဆာ ရေးတတ်တဲ့ တရုတ်ကြီးကိုများ နောက်မရေးအောင် ဘယ်သူကများကန့်ကွက်ကြပါလိမ့်။အဲဒီလူတွေ မီးဒုတ်။
တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ နောက်တစ်ခါဆိုရင် ဆရာမကို မခေါ်သွင်ခိုင်းနဲ့တော့၊
Chinese ပေါ်ဦးလို့ ခေါ်တွင်ခိုင်းပါရန်။
ဦးဒွန်ပျောက်နေတာ ကြာပြီ… ဦးဒွန်တူမ ကြေးမုံလေး ကြောင်ကြီးကို အသားလွတ် မုန်းနေဒယ်ဗျာ… သူလုပ်တာနဲ့ ဇိုးလေးလည်း အထင်လွဲသွားပြီတူပါရဲ့… ကြောင်ကြီး တရုတ်မကြိုက်တာ အပြစ်လားဗျာ…. :cool:
ဘရာစီယာကြိုးများ ကို တော့ ဆရာကြောင်ကြီး အောက်ခံ ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးလုပ်ဖို့ mail နဲ့ ပို့ လိုက်မယ် ။
အဟီး .. မိုက်တယ် .. chinese ပေါ်ဦး ဆိုတဲ့အတိုင်းဘဲ .. ကျွန်တော်ကတော့ လူတွေပြောပြောနေတဲ့ သူတော်စင်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် အကြောက်မရှိအလန့် မရှိဖတ်သွားပါတယ်။ အဲ သူတော်စင်တွေလည်း ဘယ်နေလိမ့်မတုံး .. ဖတ်မှာ သေချာတယ် .. ကွန်ပျူတာကိုလက်ဖ၀ါးနဲ့အုပ်ပြီးတော့လေ ..
ဘာရာကိုငှက်ပျောသီးကိုင်းတတ်ရင် အနက်ရောင်ဘရာဖြစ်တဲ့အတွက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မယ့် ထီးတစ်လက်ရနိုင်ကြောင်း ……….
သားသားတို့ကကရေးရေးနော် ဘရာအကြောင်းကော ငှက်ပျောကြော်အကြောင်းကော ဖတ်တွားဘူး……
[em:2:][em:2:][em:2:] ဒဂျီးရဲ့မုန်လာဥကဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ချဉ်ဖတ်လုပ်ရောင်းလို့ကုန်ပြီတဲ့ ဒဂျီးရေ….
main dish ကို မမန့်ရဲဘူးဂျ….
ပြောင်ဇယာလား …ကမ္ဘာကြီးကို တီလုပ်ကြီး ပိုင်တဲ့ဟာ…
အင်း ..ကျုပ်ကိုကော ဘယ်တီလုပ်မလေး ဘယ်တော့ပိုင်မလဲဆိုဒါ…
စီဗီလေး တုတ်တုန်ရီရီ ကိုင်ရင်း စောင့်နေဘာဒယ် ဂျာ….
၂ ကျပ်ဘိုး အားပေးသွားပါတယ်….
ဟားဟားဟား…. တကယ် ရယ်ရတယ်ဗျာ… အားပေးနေပါတယ်…